Ireo karazana RAM izay mandehandeha amin'ny Computer ankehitriny
Vaovao & Manaraka Sangany
Saika ny rafitra rehetra manan-danja dia mila RAM. Jereo ny fitaovana ankafizinao (ohatra smartphones, tablette, solosaina, ordinatera, calculateur calculators, HDTVs, rafitra gaming an-tariby, sns), ary tokony hahita fanazavana momba ny RAM ianao. Na dia samy manana ny tanjona mitovy ihany aza ny RAM rehetra, dia misy karazana vitsivitsy vitsivitsy ampiasaina ankehitriny:
Ny tahan'ny singa miovaova ho an'ny Dynamic RAM (SDR SDRAM)
Graphics Double Data Rated Synchronous Dynamic RAM (GDDR SDRAM, GDDR2, GDDR3, GDDR4, GDDR5)
Inona ny RAM?
RAM dia manana Memory Random Access , ary manome ny ordinateran'ny sehatra virtoaly ilaina amin'ny fitantanana vaovao sy hamaha olana amin'ny fotoana. Azonao atao ny mieritreritra azy io toy ny taratasy amam-pahaizana azo averina alalana hanoratra marika, tarehimarika, na sary amin'ny pensilihazo. Raha mandao ny efitrano amin'ny taratasy ianao dia mameno bebe kokoa amin'ny famafana izay tsy ilainao intsony; Ny RAM dia mitovitovy amin'izany raha mila toerana malalaka kokoa hiatrehana ny fampahalalana maharitra (ie rindrambaiko / programa). Ny taratasy lehibe kokoa dia ahafahanao mamoaka hevitra bebe kokoa (sy lehibe kokoa) amin'ny fotoana alohan'ny hamoahana azy; Mihabetsaka kokoa ny RAM ao anatin'ireo ordinatera dia mitovy ny vokany.
Ny RAM dia tonga amin'ny endrika isan-karazany (toy ny fomba mifandray ara-batana na amin'ny serasera amin'ny rafitra mpanitsy), ny fahaiza-manao (azo jerena ao amin'ny MB na GB ), ny haavony (voatanisa amin'ny MHz na GHz ), ary ny architectures. Ireo sy ireo lafiny hafa dia zava-dehibe hodinihina amin'ny fanavaozana ny rafitra miaraka amin'ny RAM, satria ny rafitry ny solosaina (ohatra Hardware, motherboards) dia tokony hifikitra amin'ny fitsipika henjana fifanarahana. Ohatra:
Ireo solosaina zokiolona dia tsy mahavita mametraka ny karazam-pitaovana farany momba ny RAM
Ny fahatsiarovan'ny laptop dia tsy tafiditra ao amin'ny desktop (sy ny mifamadika)
Ny RAM dia tsy voatery mihemotra foana
Amin'ny ankapobeny, ny rafitra dia tsy afaka mifangaro sy mifanaraka amin'ny karazana / taranaka samihafa miaraka
Fotoana an-tsena: ny taona 1990 hanatrika
Famokarana malaza mampiasa SRAM: Kamerà nomerika, router, pirinty, efijery LCD
Ny iray amin'ireo karazam-pahatsiarovana roa (ny iray hafa dia DRAM), SRAM dia mitaky herinaratra tsy miovaova mba handaminana. Noho ny hery mitohy, ny SRAM dia tsy mila 'hamelombelona' hahatsiaro ny angon-drakitra voatahiry. Izany no mahatonga ny SRAM antsoina hoe 'statika' - tsy misy fiovana na hetsika (ohatra mamelombelona) ilaina mba hitazonana ny angon-drakitra. Na izany aza, ny fahatsiarovan-tena tsy mahomby dia ny SRAM, izay midika fa ny tahirin-tsarimihetsika rehetra voavonjy dia very rehefa tapaka ny herinaratra.
Ny tombony amin'ny fampiasana ny SRAM (vs. DRAM) dia ny fihenan'ny herinaratra ary ny haingam-pifandraisana haingana kokoa. Ny tsy fitoviana amin'ny fampiasana SRAM (vs DRAM) dia ny fahaiza-manao tsaratsara kokoa sy ny vola lany amin'ny famokarana. Noho ireo toetra ireo dia ampiasain'ny SRAM amin'ny:
CPache cache (ohatra L1, L2, L3)
Hard drive buffer / cache
Mpandika ho an'ny Digital-to-Analog (DAC) amin'ny sarimihetsika video
Fotoana an-tsena: 1970s ka hatramin'ny tapatapaky ny taona 1990
Famokarana malaza mampiasa DRAM: Console video, fitaovana enti-manomboka
Ny iray amin'ireo karazam-pahatsiarovana fototra roa (ny iray hafa ny SRAM), DRAM dia mitaky 'famelombelomana' ny hery mba hiasa. Ireo capacitors izay mitahiry ny angon-drakitra any DRAM tsikelikely dia mamoaka angovo; Tsy misy angovo midika hoe very ny data. Izany no mahatonga ny DRAM antsoina hoe 'dynamic' - fiovana miovaova na fihetsika (ohatra mamelombelona) ilaina mba hitazonana ny angon-drakitra. DRAM koa dia fahatsiarovana tsy fahampiana, midika izany fa very ny angon-drakitra voatahiry rehefa tapaka ny herinaratra.
Ny tombony amin'ny fampiasana DRAM (vs. SRAM) dia ny fandaniana ambany kokoa amin'ny famokarana sy ny fahaiza-manao faharesen-dahatra. Ny fatiantoka amin'ny fampiasana DRAM (vs. SRAM) dia ny faharetan'ny haingon'ny fidirana sy ny fihenan'ny herinaratra. Noho ireo toetra ireo, ny DRAM dia matetika ampiasaina amin'ny:
Rafitry ny rafitra
Sarimihetsika video fahatsiarovana
Nandritra ny taona 1990 dia novolavolaina ny EDDM RAM (EDO DRAM) Extended Data Out , avy eo ny evolisiona, Burst EDO RAM (BEDO DRAM). Ireo karazana fahatsiarovan-tena ireo dia nahasarika noho ny fampitomboana ny vokatra / fahombiazana amin'ny vidiny ambany. Na izany aza, ny teknolojia dia novolavolaina tamin'ny fivoaran'ny SDRAM.
Fotoana an-tsena: 1993 hanatrika
Famokarana malaza mampiasa SDRAM: fahatsiarovan'ny ordinatera, horonan-tsarimihetsika video
SDRAM dia fametrahana ny DRAM izay miara-miasa amin'ny famantaranandron'ny CPU , izay midika fa miandry ny famantaranandro ny famantaranandro alohan'ny hamaliana ny angon-drakitra (ohatra interface interface). Mifanohitra amin'izany kosa, ny DRAM dia asynchronous, midika izany fa mamaly avy hatrany ny fidirana amin'ny data. Saingy ny tombontsoa amin'ny fandidiana synchronous dia ny CPU dia afaka manova ny torolàlana mivelatra mifanaraka amin'ny torolàlana, fantatra ihany koa amin'ny hoe 'pipelining' - ny fahafahana mandray (famakiana) fampianarana vaovao alohan'ny nandraisana ny torolàlana teo aloha (soraty).
Na dia tsy misy fiantraikany amin'ny fotoana ahafahana manara-maso ny torolàlana aza ny pipelining, dia mamela torolàlana maromaro ihany izy vao ho vita. Ny fanovana ny famakiana iray sy ny fampianarana iray isan-tsegondra isaky ny famantaran'ny famantaranandro dia miteraka vokatra avo lenta kokoa amin'ny CPU. Ny SDRAM dia manohana ny fitrandrahana amin'ny alàlan'ny fomba fisaratsarahan'ny banky samihafa, izay nitarika ny safidiny amin'ny DRAM.
Famokarana malaza mampiasa SDR SDRAM: fahatsiarovan'ny ordinatera, horonan-tsarimihetsika video
Ny SDR SDRAM dia ny teny fampidinana ho an'ny SDRAM - ireo karazany roa ireo dia mitovy, nefa matetika no antsoina hoe SDRAM fotsiny. Ny 'tahan'ny tahirin-tsakafo tokana' dia manondro ny fomba amam-pitenenana ny famakiana iray ary ny fampianarana iray isaky ny famantaranandro. Ity fametahana ity dia manampy amin'ny fampitahana ny fampitahana eo amin'ny SDR SDRAM sy DDR SDRAM:
Ny DDR SDRAM dia tena fampivelarana ny SDR SDRAM
Fotoana an-tsena: 2000 hanatrika
Famokarana malaza mampiasa ny DDR SDRAM: fahatsiarovan'ny ordinatera
Ny DDR SDRAM dia miasa toy ny SDR SDRAM, avo roa heny fotsiny. Ny DDR SDRAM dia afaka manamboatra torolàlana roa sy fehezanteny roa isaky ny famantaranandro (noho izany ny 'double'). Na dia mitovy aza ny asany, ny DDR SDRAM dia manana fahasamihafana ara-batana (pinpo 184 ary kambana iray eo amin'ny connecteur) mifanohitra amin'ny SDR SDRAM (satroka 168 ary roa kely eo amin'ny connector). Ny DDR SDRAM koa dia miasa amin'ny alàlan'ny tsipika ambany (2.5 V avy amin'ny 3.3 V), misakana ny fifanarahana amin'ny SDR SDRAM.
DDR2 SDRAM no fanavaozana ny evolisiona ho an'ny DDR SDRAM. Raha mbola mitazona ny tahan'ny tahirin-tsakafo (manamboatra fehezan-dalàna roa sy fehezan-dalàna roa isaky ny famantaranandro), dia haingana kokoa ny DDR2 SDRAM satria afaka mihazakazaka amin'ny haavo faran'ny haavo. Fitsaboana (tsy mihoatra ny fehezina ) DDR (môtô) mihoatra ny 200 MHz, fa ny môtera miavaka DDR2 miakatra amin'ny 533 MHz. Ny DDR2 SDRAM dia mihazakazaka eo amin'ny tsipika ambany (1.8 V) misy marika maromaro kokoa (240), izay manakana ny fifanarahamaso.
Ny DDR3 SDRAM dia manatsara ny fahaiza-manaon'ny DDR2 SDRAM amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny faharetana (fahabetsahana), ny fahaiza-manao faharesen-dahatra, ny fihenan'ny herinaratra (1.5 V), ary ny haingam-pandeha ambony maoderina (hatramin'ny 800 Mhz). Na dia mitovy aza ny DDR3 SDRAM toy ny DDR2 SDRAM (240), ny endri-javatra rehetra dia misoroka ny fihenan'ny fifanarahana.
Ny DDR4 SDRAM dia manatsara ny fahaiza-manaon'ny DDR3 SDRAM amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny faharetan'ny signal (fahamendrehana), na ny fahaizan'ny mpilalao tsaratsara kokoa aza, na ny fihenanam-pahefana (1,2 V), ary ny haingam-pandeha (hatramin'ny 1600 Mhz). Ny DDR4 SDRAM dia mampiasa ny fikandrana 288-pin, izay manakana ny fifanatonana indray.
Graphics Double Data Rated Synchronous Dynamic RAM (GDDR SDRAM)
Fotoana an-tsena: 2003 hanatrika
Karazan- tsarimihetsika mampiasa GDDR SDRAM: Karatra video-tsary, takelaka misy
GDDR SDRAM dia tandindon'ny DDR SDRAM izay natao manokana ho an'ny fampisehoana an-dahatsary amin'ny horonan-tsary, amin'ny ankapobeny miaraka amin'ny GPU natokana ho an'ny grafika amin'ny grafika . Ny lalao PC amin'izao fotoana izao dia fantatra amin'ny fanosehana ny valopy miaraka amin'ny tontolo tena marina azo antoka, izay matetika mitaky rafitra matanjaka be sy ny fitaovana tsara indrindra karatra video mba hilalao (indrindra rehefa mampiasa fampiseho 720p na 1080p avo ).
Tahaka ny DDR SDRAM, ny GDDR SDRAM dia manana ny sehatra evolisiona (hanatsara ny fahombiazany sy ny fampihenana ny herin'aratra): GDDR2 SDRAM, GDDR3 SDRAM, GDDR4 SDRAM, ary GDDR5 SDRAM.
Na dia mifampizara toetra mitovy amin'ny DDR SDRAM aza ny GDDR SDRAM dia tsy mitovy mihitsy. Misy fahasamihafana tsy dia misy loatra amin'ny fomba ampiasain'ny GDDR SDRAM, indrindra indrindra mikasika ny fomba fijerin'ny bandwidth momba ny faharetana. Ny GDDR SDRAM dia andrasana handefa betsaka ny angon-drakitra (bandwidth), fa tsy voatery ho haingana haingana (haingam-pandeha) - mieritreritra lalam-barotra 16 lane napetraka tao amin'ny 55 MPH. Raha ampitahaina, ny DDR SDRAM dia andrasana fa kely dia kely ny mamaly ny CPU - mieritreritra lalambe 2 lane napetraka amin'ny 85 MPH.
Fotoana an-tsena: 1984 hanatrika
Ireo vokatra malaza amin'ny fampiasana ny Flash Memory: Cameroon digital, smartphones / tablets, rafitra gaming / kilalao
Ny fahatsiarovana Flash dia karazana tahirin-tserasera tsy misy tosika izay mitazona ny angon-drakitra rehetra rehefa tapahina ny herinaratra. Na dia eo aza ny anarana, ny fahatsiarovan'ny flash dia manakaiky kokoa ny endrika sy ny fandidiana (izany hoe ny fametrahana sy ny famindrana angona) ho an'ny solosaina matanjaka kokoa noho ireo karazana RAM voalaza etsy aloha. Ny fahatsiarovan'ny Flash dia matetika ampiasaina amin'ny:
Small electronics / toys
5 Toy ny zava-misy marina
Manana Tranonkala Vaovao ve ny PC?
Fikambanana sy fampiharana politika vaovao
Inona ny App Zedge?
DeLorme PN-40: Fiatoana, ary be dia be ny Maps
KeRanger: Ny razana malaza voalohany amin'ny Mac dia voavaha
Fomba hananana kilasy kilasy
Adapiran-danja iraisam-pirenena: Ny zavatra tokony ho fantatra
Ahoana no ahafahanao mampifandray ambioka amin'ny rafitra stereo
Ampiasao ireo pejy Master ao amin'ny Adobe InDesign CS
IPhone 6s Review: Ny gamer's Perspective
Ahoana no ahafahan'ny iPad any an-dakozia
Mampifanaraka ny adiresy Unix / Linux ary Directory Access Rights
Ahoana ny fomba fandefasana mailaka lisitra an-tsoratra avy amin'ny Gmail asa
Ahoana no fametrahana pejy webcam?
Ahoana ny fomba hividianana rafitra stereo izay mahasoa anao?
Subwoofers - Izay Ilainao Fantarina
Mampiasà Sticky Notes ao Windows Vista, 7, ary 10
Fichier Sharing Amin'ny Mac OS X sy Windows
Mampiditra fizarana sary amin'ny Flash
Ny fahasamihafana eo amin'i Linux sy GNU / Linux
Ahoana ny fahasamihafan'ny sifotra bronze sy ny fitaovana fanampiny?
Ahoana ny fametrahana sivana amin'ny Yahoo! Mail
Haka ny endriky tranokala ve ny Web 3.0?
Torolalana ho an'ny mpanaraka ao amin'ny Twitter
Mitandrina tsara amin'ny fakantsary
Ahoana no fomba handefasana ny mailaka Gmail mampiasa filtres